Madaxweyne Xasan Sheekh oo Ka Digay Muddo Kororsiga 2020 – Goobjoog News
in amaanka, Gobalada, Qormooyin, Wararka Dalka
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka digay aragtida ay wadaan dad khubaro isku sheegaya laakin ka hadlaya waddo suurtagalineyso in la sammeeyo KORORSIIMMO xilliga hay’adaha dastuuriga qaarkood iyadoo lagu sababeynayo haddii ay dhacaan duruufo aan doorasho laga qaban karin.
Madaxweynaha waxaa uu sheegay in arrintaasi aaney waxbo ka jirin oo Soomaaliya ay doorasho gashay iyada oo ku jirta dagaalkii 64-tii qarnigii tagay, xilli abaaro jireen 2011-2012 iyo xilliyo kale.
Haddaba, Halkan Ka Akhriso Qoraalka Madaxweyne Xasan Sheekh:
iyadoo baryahaan Golaha Shacaba ee baarlammaanka ka doodayo xeerka doorashada JFS, in siyaasiyiinta qaarkood iyo dad sheegta iney qubaro yihin ay ku doodayaan ifinta Waddo suurtagalineyso in la sammeeyo KORORSIIMMO xilliga hay’adaha dastuuriga qaarkood iyadoo lagu sababeynayo haddii ay dhacaan duruufo aan doorasho laga qaban karin. Lix bilood ayaa doorashada dib loo dhigayaa haddii ay dhacaan duruufahaas – kuwaas oo aan la garaneyn waxa ay yihiin. Haddii lix bilood looga bixi waayana, baarlammaanku waa joogayaa ee madaxda ayaa la dooranayaa. Baarlammanku wuxuu joogayaa markaas ilaa xilli aan la garaneyn isna.
1964tii dalka Soomaaliya waxaa laga qabtay doorasho iyadoo dalku ku jiro dagaal. Xilligaas waxaa soo baxay halhayskii caanka noqday ee ahaa “GACANNE WAXBAAN KU DOORANEYNAA GACANTA KALENA DALKAAN KU DAAFACEYNAA”. Doorasho lagu guuleystay ayaa dhacday iyadoo dagaalkii uu Socodo.
Waxaan leeyahay doorashadu waa ASTAAN dowladnimo oo leh xeer iyo dhaqan dimoqraadi ah.